နှုတ်ကပတ်တော်ကို Connect ကို - နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုကွတ်ကီး: နှုတ်ကပတ်တော်ကိုရှာရန် | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ပျော်စရာ & ဂိမ်းများ » နှုတ်ကပတ်တော်ကို Connect ကို - နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုကွတ်ကီး: နှုတ်ကပတ်တော်ကိုရှာရန်
နှုတ်ကပတ်တော်ကို Connect ကို - နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုကွတ်ကီး: နှုတ်ကပတ်တော်ကိုရှာရန် APK ကို
သငျသညျစကားလုံးပဟေဠိဂိမ်းကိုခံစားပါသလား ဒီနေရာတွင်အဘို့အပြီးပြည့်စုံသောစကားလုံးဂိမ်းများကိုလာ! နှုတ်ကပတ်တော်ကိုရှာရန်ဂိမ်းဒါစိန်ခေါ်မှုဖြစ်ဘယ်တော့မှသိရသည်။ အဆိုပါဂန္စကားလုံးရှာဖွေရေးဂိမ်း မှလွဲ. နယူးနှုတ်ကပတ်တော်ကို Connect ကိုဂိမ်း NOW ကလည်းရရှိနိုင်ပါသည်။ နှစ်ဦးကဂိမ်း Modes သာ WORD GENIUSES အဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။
လာကြခြင်းနှင့်အပေါငျးတို့သညျလြှို့ဝှကျစကားလုံး cookies တွေကိုထွက်ရှာပါ! အခမဲ့ယခုတပ်ဆင်ပါ!
နယူးအင်္ဂါရပ်များ: နယူးစကားလုံး Connect ဂိမ်း NOW ကရရှိနိုင်ပါသည်။
ပဟေဠိဖြေရှင်းနိုင်ဖို့စကားလုံးများကိုကျော်လက်ချောင်းလျှော & ဆွဲယူပါ။ သငျသညျတိုးအဖြစ်ဂိမ်း trickier ရရှိသွားတဲ့။ ဒီဂိမ်းရဲ့ဦးနှောက်ကြော်ငြာဗီဒီယိုတွင်တစ်ကြိမ်သင့်ရဲ့ဝေါဟာရ, နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စဉ်းစားတွေးခေါ် & ကျွမ်းကျင်မှုဖြေရှင်းရေးပဟေဠိစမ်းသပ်ရန်။
★အချိန်မရွေးနှင့်ဘယ်နေရာမှာမဆိုအချိန်မကန့်သတ်နှင့်အတူအော့ဖ်လိုင်း Play ။
★အခမဲ့ & ကစားရန်လွယ်ကူသော, သခင်စိန်ခေါ်
★လေးတွေ & လူကြီးများအတွက်ပြီးပြည့်စုံသော, အသက်အရွယ်အဘို့ဒီဇိုင်း!
သင့်ရဲ့နေ့စဉ်ဦးနှောက်လေ့ကျင့်ရေး NOW က Start!
နယူးဂိမ်း Add: နှုတ်ကပတ်တော်ကို Connect ကို
နှုတ်ကပတ်တော်ကို Connect ကို - နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုကွတ်ကီး: နှုတ်ကပတ်တော်ကိုရှာရန်
17.45 ကို MB
3 Little ကစကား: ...